बिपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउने जनकमानले जागिर गुमाए - Gaule News
काठमाडौँ, माघ १७–
‘न्यायाधीशज्यू हजूरलाई गृहमन्त्रीको आदेश छ, सिंहदरवार जान प¥यो, गाडी तयार छ’ गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेको नाम लिएर तत्कालीन नारायणी अञ्चलाधीशबाट यस्तो खबर पाएपनि न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौँ आउनुभएन । “गृहमन्त्रीले भनेर म जाने होइन, कि त मलाई प्रधानन्यायाधीशले डाक्नुपर्यो नत्र म जान्नँ,” न्यायाधीश श्रेष्ठले अडान लिनुभयो । नभन्दै साँझपख तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको फोन आयो ।
श्रेष्ठलाई काठमाडौँ आउन नारायणी अञ्चालाधीश कार्यालयले गाडीको व्यवस्था गरी बिहान ६ बजेदेखि हेटौंडास्थित उहाँको सरकारी निवास अघि राखिएको थियो । गृहमन्त्रीको आदेश अनुसार सिंहदरबार जाऔँ भन्ने अञ्चलाधीशको भनाइलाई नमान्दा बिहानैदेखि उहाँको निवास अघि गाडी बसेको थियो ।
माइक्रोवेभ टेलिफोन बिग्रेकाले दिउँसो फोन आएनछ । साँझ फोन आएपछि उहाँले प्रधानन्यायधीश खत्रीसँग ‘हजूरले भन्नुभएको हो ?’ भनेर सोधेपछि ‘मेरै आदेश भन्नुपर्यो नि ! ’ भन्ने उत्तर पाउनुभयो ।
गृहमन्त्री घिमिरेले ‘तपाईं सक्षम न्यायाधीश हुनुहुन्छ बिपीसँग बयान लिई मुद्दा फैसला गर्नुपर्यो’ भनेर फकाउने प्रयास गर्नुभयो । “पुष्पराज हुँदाहुँदै मलाई किन बोलाइयो ? मबाट मृत्युदण्डको फैसला गराउन खोजेको ? भन्दै म कड्किएँ, जनकमानको हातबाट फैसला गराउने, गाडीमा झन्डा फहराएर तपाईंहरु गद्दीमा बस्ने ? यहाँ धेरै न्यायाधीश छन्, धन्य धन्य मन्त्रीजी मलाई नै सम्झनुभयो भनेँ”–उहाँले घटना सम्झँदै भन्नुभयो ।
यसरी विसं २०३४ वैशाख १४ गते बिपी र गणेशमानसँग विशेष अदालतले बयान लिन सुरु गर्यो । बयान दिन बिपी उभिनुभयो । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग बयान सुरु गर्दाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो– “उभेर बयान दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उहाँबाट केही प्रतिक्रिया आएन । एक दिनमा बयान नसकिने भएकाले मेचमा बसेर बयान दिने व्यवस्था गरेँ ।” विसं २०३० जेठ ३० गते बिराटरनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको हवाईजहाज अपहरण काण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको नामसहित उहाँहरुविरुद्ध मृत्युदण्डको मुद्दाको फाइल थियो । विमान अपहरणमा बिपी, गणेशमानको नाम थिएन । उहाँहरु पार्टीको नेतृत्वकर्ता भएकैले यो मुद्दा पनि सँगै राखिएको थियो । अपहरणमा संलग्न नेताहरु सबै भारत निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो ।
“गणेशमानको बयान बिपीको भन्दा फरक थियो, ‘मेरो राजासँग कुरा भइरहेको छ, मलाई प्रधानमन्त्री हुन राजाका दूतले पटक पटक खबर पठाउनुभएको छ । राजाको प्रधानमन्त्री हुन्नँ भनेको छु’ भन्ने गणेशमानको बयानको भाव थियो”– उहाँले भन्नुभयो । ‘मुद्दा चलाइएका विषय पार्टीले निर्णय गरेर नगरेकाले हामी नेता जवाफदेही हुन्नौँ’ भन्ने नेता गणेशमानको जिकिर थियो । ‘सस्तो नेतृत्व’ चाहिएको छैन भन्ने गणेशमानको बयानमा उल्लेख थियो । गणेशमानले हतियार उठाउन आफू र बिपी दुवैको हात नरहेको बयान दिनुभयो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो – “‘ज्यान मुद्दा ठहरे मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ’ भन्ने लेखेर प्रधानन्यायाधीश खत्रीकहाँ लगेँ । उहाँ कम्प ज्वरो आएर सुत्नुभएको रहेछ । उहाँ टाउको बेरेर सिरक ओढेर सुत्नुभएको थियो । उहाँले मलाई दरबारका प्रमुख सचिव खनालकहाँ पठाउने कुरा गर्नुभयो । मेरै अघि पल्टाएर हेरे के गर्ने रु भनेर मैले भनेँ । प्रधानन्यायाधीश खत्रीसँग ‘लाहा छाप लगाएर पाँच पैसाको ढ्याक टाँसेर श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफ’मा भनी चिठी लेखेर लैजाने सल्लाह भयो ।” प्रधानन्यायाधीश खत्रीको सल्लाहअनुसार श्रेष्ठ सचिव खनालको घरमा जानुभयो । “तपाईंहरु किन डराउनु भएको ? फैसला गर्नूस्”– सचिव खनालले भन्नुभयो । मुद्दामा एसएसपीले झोलाबाट बम निकालेर झन्डै हान्न लागेको देखेको तथ्य छ, ती एसएसपी अहिलेसम्म बयान दिन आउनुभएन भनी सचिव खनाललाई बताएपछि खनालले ‘झिकाइदिन्छु’ भन्नुभयो । “केही भए पहिलो पीडित हामी हुन्छौँ, फैसला गर्नूस्”– खनालले भन्नुभयो ।
खनालले पछि ‘त्यो गणेशमानलाई कसरी सफाइ दिएको ?’ भनी प्रधानन्यायाधीश खत्रीसँग रिस पोख्नुभएछ । अध्यक्ष बिपीको नाम नलिएकाले अन्य कुनै अर्थ लगाउनुभयो कि जस्तो लागेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “फैसलापछि मलाई पोखराको अस्थायी न्यायाधीश बनाइयो, छ महिनापछि खनालको आदेशमा धन्यवादसहित अवकाश दिइयो, प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय नदिँदा मैले पुरस्कारस्वरुप जागिरको अवधि बाँकी हुँदै अवकाश पाएँ”– ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला गर्ने अवसर पाउनुभएका न्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो । –रासस
कैलालीमा बाबुले प्रहार गरेको खुकुरीबाट छोराको मृत्यु
कठ्याङ्ग्रिएर दुईजनाको मृत्यु